Fosil na-eweputa usoro ohuru nke smartwatch ya na Wear OS | Akụkọ akụrụngwa
Fosil na-ewetara ọhụụ ọhụụ ọhụụ ya na Wear OS
Fosil bụ otu n'ime ụdị ndị na-ekiri ike na Wear OS, na akụkụ n'ihi na Google etinyela nnukwu ego na ngalaba nke ụlọ ọrụ a. Firmlọ ọrụ ahụ na-ahapụ anyị ugbu a na ọgbọ ọhụrụ, nke ise na mkpokọta. Ha na-ahapụrụ anyị anya abụọ dị iche iche, nke dị obere ntakịrị n’etiti ha, ihe dị n’ihe atụ na agba.
Onye mbụ n’ime ha bụ Julianna HR, nke pụtara ìhè maka inwe ụdị nwanyị na ọla edo-pink. Ọ bụ ezie na ụdị nke abụọ Fosil hapụrụ anyị bụ Carlyle HR, nke nwere akara ojii na isi awọ yana imepụta ụmụ nwoke ọzọ. Nhọrọ abụọ, nwere ọtụtụ agba na nke ọ bụla.
Nha na akụkụ, gbakwunyere nkọwa, ha bu otu ihe na nke a. Branddị ahụ ewebatala ọrụ ọhụụ na nche ndị a, na-eme ka o doo ha anya na ha bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ị ga-atụle na mpaghara ahịa a. N'ihi ya, a na-ewepụta ha dị ka nhọrọ abụọ dị mma iji zụta n'ọhịa nke smartwatch.
1 Nkọwapụta Fosil Gen 5
Nkọwapụta Fosil Gen 5
Companylọ ọrụ emeela ka ọ gbanwee ọhụụ. Ha na-ahapụrụ anyị nche abụọ dị mma, nke nwere otu nkọwa na nke abụọ, dịka amaraworị. Tụkwasị na nke a, Fosil na-etinye usoro ọrụ ọhụrụ n'ime ha, iji mee ka ha nwekwuo nche zuru oke, iji nwee ike ịsọ mpi na ụdị ndị ọzọ na mpaghara a, dịka Samsung ma ọ bụ Xiaomi. Ndị a bụ nkọwa nkọwa ya:
Ngosipụta: 1,28 nke anụ ọhịa AMOLED na mkpebi 328 x 328 pixel
Processor: Snapdragon Yiri 3100
Nchekwa dị n'ime: 8 GB
Sistemụ nrụọrụ: eyi OS
Batrị: awa iri isii nke nnwere onwe yana ụgwọ ọrụ ọsịsọ
Njikọta: Bluetooth 4.2 LE, WiFi, NFC, GPS
Kwekọrọ n'Ozizi na Android 4.4 ma ọ bụ karịa na iOS 9.3 ma ọ bụ karịa
Nguzogide mmiri: 3 ATM
Sensọ: Altimeter, Ambient Light, Gyroscope, Rate Heart
Ndị ọzọ: Batrị ụdịdị, magnetik odori, music akara
Akụkụ: 44 x 44 x 12 mm
Enwere akwukwo ohuru abuo na ohuru ohuru a nke smartwatches si Fosil. N'otu aka ahụ, ika ewebatala onye na-ekwu okwu na nche, nke ga - enye anyị ọtụtụ ohere iji mee ihe. Echiche bụ na anyị nwere ike iji ya chịkwaa egwu, gbanwee egwu ma ọ bụ jiri ya na ọrụ dị ka mmekọrịta site na olu na Google Assistant na iji ntụgharị asụsụ na Translate n'oge ọ bụla. Ya mere, o kwere nkwa ịbụ ihe dị mkpa na nche a.
Ọzọkwa, Ọhụrụ a Fosil bịara na ụdị batrị ọhụrụ. Companylọ ọrụ ahụ maara na nnwere onwe nke elekere bụ ihe na-echegbu ndị ọrụ mgbe niile, ndị chọrọ ịnweta nnwere onwe kachasị ukwuu na nke ha. Ya mere, anyị na-ahụ ọtụtụ nhọrọ na nke a, nke ga-enye anyị ohere ịhazi ya ma mee ọtụtụ batrị elekere n'ụzọ dị otú a. Modes anyị nwere:
Ogologo batrị mode: Naanị ọrụ dị mkpa nke nche na-arụ ọrụ
Modebọchị kwa ụbọchị: Anyị nwere ọtụtụ ọrụ nyeere nyeere ya. Enwere ike ịsị na ọ bụ usoro eji eme nche
Omenala mode: Onye ọrụ bụ onye na-ekpebi ihe na-hazi na ihe ọrụ na ntọala anọgide na-arụ ọrụ
Oge-naanị mode: Elekere gbanwere iji gosipụta naanị oge iji zere ị batteryụbiga batrị oke
Maka ndị ọzọ, anyị nwere ike iji ọrụ ndị dị na nche na nke a. Site na ịhụ ọkwa, ịnweta oku, ịge egwu na ịdebe mmemme ahụ onye ọrụ n'oge niile. Enweghị nnukwu ihe ịtụnanya na nke a maka ndị ọrụ nwere mmasị na ụdị Fosil ndị a.
Ọgbọ ọhụrụ a nke Fosil Enweela ya na ire na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ahụ, na mgbakwunye na isi nke ere ere. Ọ bụ ezie na ugbu a ọ gaghị ekwe omume ịzụta ha n'ụlọ ahịa na Spain ma enyeghị nkọwa banyere mmalite ha. Ọ gaghị ewe oge iji bụrụ onye isi, mana anyị ga-echere maka akụkọ.
Modelsdị niile dị ọnụahịa otu, dịka nkọwa ha bụ otu. Fosil setịpụrụ ọnụahịa nke $ 295 na elekere ndị a, nke a ga-ebido n'izu ndị a gburugburu ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Fosil na-ewetara ọhụụ ọhụụ ọhụụ ya na Wear OS
Isi mmalite HS-3 Isi nyocha